भुल्नै नहुने मौलिकपन
लागूऔषध दुर्व्यसनको मुख्य कारण बेरोजगारी: कति युवा किन फस्छन् दुर्व्यसनमा ?
थारु आयोगले पूर्णता नपाउँदासम्म काम गर्न सकिदैन: अध्यक्ष चौधरी
कामदारबाट रकम ठग्ने व्यक्ति नै वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्य, को हुन् कैलाश खड्का ?
बन्दाबन्दी खुकुलो भएसँगै उपत्यकामा बढे कोरोना संक्रमित, देशभर थपिए २०४ जना संक्रमित
बन्दाबन्दीपछि इन्टरनेटको खपत ३५ प्रतिशत बढ्यो, कसरी भित्रिन्छ नेपालमा इन्टरनेट ?
सरिता गिरीलाई सांसद र पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही
हिंसा पीडितलाई सार्वजनिक गर्दा संवेदनशील नभए सरकारले कारबाही गर्ने
गंगालाल अस्पतालका बिरामीमा कोरोना देखिएपछि आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द
टिप्पणी विहीबार, चैत २८, २०७५
रुग्ण सम्पदा पुनर्निर्माणका क्रममा आधुनिक समयको माग भन्दै मौलिकता नामेट पार्ने गरी तामझाम गरिनु सभ्यता र संस्कृतिमाथिको आक्रमण हो ।
२०७२ सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बसन्तपुरस्थित गद्दी बैठक पुनर्निर्माण पछि । तस्वीर: बिक्रम राई
२०७२ सालको भूकम्पपछि ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा कुनै पक्षको पनि विमति थिएन । तर, कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्नेबारे धेरै विवाद देखिए । यसबाट कतिपय पुनर्निर्माण कार्य अवरुद्ध भए, कतिपयमा ढिलासुस्ती भयो ।
पुनर्निर्माणमा देखिएको विवादका विषय केलाउँदा धेरैजसो सम्पदामा मौलिकताको प्रश्न जोडिएको देखिन्छ । सम्पदामा मौलिकताको महत्वबारे संवेदनशील नहुँदा नै यो समस्या देखापरेको हो ।
सम्पदा पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा ‘पुरानो मात्रै भनेर हुन्न, नयाँ युग अनुसार बढ्न पनि जान्नुपर्छ’ भन्ने आग्रह पनि आउने गर्छ, यो घातक सोच हो । यस्तो आग्रहले सम्पदाको स्थापित मान्यतालाई नकारेको छ । सम्पदा भावी सन्ततिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पुर्खाबाट प्राप्त नासो हो । नासो मास्न/फेर्न मिल्दैन, यसको सुरक्षा गर्नु प्रमुख जिम्मेवारी हुन्छ ।
सांस्कृतिक सम्पदाको प्रमुख विशेषता भनेकै यसको ऐतिहासिक पाटो हो । यसै कारण पुनर्निर्माण गर्दा पनि ऐतिहासिकतामा ध्यान दिइन्छ ।
साना–ठूला जुनसुकै सांस्कृतिक सम्पदाको अध्ययनबाट तत्कालीन सभ्यता, संस्कृति, जनजीवनका साथै आर्थिक स्थितिबारे जानकारी प्राप्त हुन्छ । नेपाली समाजमा पाइने सामाजिक–सांस्कृतिक विविधता जस्तै सम्पदामा पनि विविधता पाइन्छ ।
बस्तीको कुरा गर्दा, घरको बनावट हेरेरै जातीय समुदायमध्ये कसको हो भनेर छुट्याउन सकिन्छ । मौलिक नेवार बस्तीमा एउटा घरको छाना अर्कोसँग जोडेर लहरै बनाइएको पाइन्छ भने पहाडमा ब्राह्मण क्षत्री लगायतका घरहरू प्रायः छरिएका हुन्छन् ।
ब्राह्मण क्षत्रीका घरको आँगनमा तुलसीको मठ हुन्छ भने नेवार समुदायको घरको मूल ढोका अगाडि ‘पिखालखु’ भनेर एउटा ठाउँ छुट्याइएको हुन्छ, जसलाई ‘भेलू’ (भैरवको स्थान) मानेर प्रत्येक बिहान पूजा गरिन्छ । यसैगरी अन्य जातजातिको बस्तीको बनावट, घरको शैली र प्रयुक्त कलावस्तु फरक–फरक हुन्छन् ।
यी फरकपन नै मौलिकता हो । देशमा विविध जातजातिको बसोबास भए पनि यी सांस्कृतिक विविधतामा रहेको मौलिकपनमा ध्यान नदिनु अध्ययनको कमी हो ।
जनजीवनसँग धार्मिक तथा सांस्कृतिक विषय नङ र मासु जस्तै जोडिएका हुन्छन्, त्यसको संरचना भने फरक हुन्छ । तामाङ, शेर्पा लगायतका बौद्ध धर्मावलम्बी जनजातिहरूका लागि अत्यन्तै महत्व राख्ने छोर्तेन तथा मानेहरू बस्तीभन्दा अलि पर डाँडामा बनाइएको हुन्छ । नेवार बौद्धहरू भने त्यस्तै संरचना चीभाः र चैत्यहरू बस्तीभित्रै बनाउँछन् ।
यो समुदायको प्रत्येक बस्तीमा गणेशको मन्दिर अनिवार्य मानिन्छ र जात्रापर्वमा प्रत्येक घरले सबैभन्दा पहिले यही मन्दिरमा पूजा गर्छन् । यस्तै, जन्म र मृत्युका साथै अन्य गतिविधिको लगत राख्ने निश्चित ठाउँ ‘छ्वास’ को व्यवस्था गरिएको हुन्छ । हेर्दा सामान्य देखिए पनि सभ्यताको विकास कसरी भएको रहेछ भन्ने देखाउने यी कुराको ऐतिहासिक महत्व छ ।
सांस्कृतिक सम्पदा कुनै निश्चित प्रयोजनका लागि निर्माण गरिन्छ । तर, त्यो प्रयोजन पूरा हुने गरी संरचना जसरी बनाए पनि हुन्छ भन्ने सोच संस्कृतिलाई पटक्कै नबुझनुको उपज हो ।
देवताको मूर्ति रथमा राखेर भीडले तानेर मनाइने जात्राको ठाउँमा ‘मोटरमा राखेर लगे भइहाल्यो नि’ भन्ने सोच पनि सांस्कृतिक मान्यता विपरीत हो । यी जात्रा–पर्व धार्मिक–सांस्कृतिक मात्रै नभई मनोरञ्जनका माध्यम पनि हुन् । मनोरञ्जनका अत्याधुनिक प्रविधि र साधन हुँदाहुँदै पनि जात्रा–पर्वमा मानिसहरू संलग्न हुनुको अर्थ सांस्कृतिक पक्ष जीवन्त रहनु हो ।
मौलिकतालाई बेवास्ता गरेर पुनर्निर्माण गरिने सांस्कृतिक सम्पदाहरू अर्थहीन हुन जान्छन् । साथै, तिनले भ्रम पनि सिर्जना गर्छन् । अर्कातिर, संस्कृतिको नाममा विनियोजन हुने बजेट सांस्कृतिक भावना विपरीत खर्च भए राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग साबित हुन्छ ।
सांस्कृतिक सम्पदाहरू हाम्रो गौरव र नासोसँगै पर्यटनका आकर्षण पनि हुन् । यदि मौलिकता नै भएन भने बाह्य जगतलाई हाम्रो आफ्नो भनेर देखाउने के कुरा बाँकी रहला ?
मंगलबार, असार २३, २०७७ लागूऔषध दुर्व्यसनको मुख्य कारण बेरोजगारी: कति युवा किन फस्छन् दुर्व्यसनमा ?
मंगलबार, असार २३, २०७७ थारु आयोगले पूर्णता नपाउँदासम्म काम गर्न सकिदैन: अध्यक्ष चौधरी
मंगलबार, असार २३, २०७७ कामदारबाट रकम ठग्ने व्यक्ति नै वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्य, को हुन् कैलाश खड्का ?
मंगलबार, असार २३, २०७७ बन्दाबन्दी खुकुलो भएसँगै उपत्यकामा बढे कोरोना संक्रमित, देशभर थपिए २०४ जना संक्रमित